Suuqa Guryaha oo ku Sugan Xaalad Heehaab - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirqaade: Scanpix. Montage: Sveriges Radio.
Suuqa Guryaha oo ku Sugan Xaalad Heehaab
La cusbooneeyay tisdag 23 augusti 2011 kl 13.00
La daabacay tisdag 23 augusti 2011 kl 10.31
Xaaladda iib iyo gadid ee suuqa ra'sumaalka aan guurin ayaa ku sugan heehaab. Qiimaha guryaha mulkida loo leeyahay ee dabaqyada dhaadheer ayaa 4% hoos u dhaceen saddexdii bilood ee ugu dambeeyey marka loo barbar-dhigo kuwii ka sii horeeyey, halka aannu wax
is-bedel ahi ku dhicin qiimaha iibinta iyo gadidda ee guryaha vilooyinka.
Sida ku cad tira-koobka ururka isbahaysiga dalaaleyda, taasina oo ay ka dambeeysay saameeynta welwelka dhaqaale iyo hoos u dhaca saamiga suuqyada baayacmushtarka addunka.
Waxaa iyaguna adkaaday sidii iibsadeyaal loogu heli lahaa dhismooyinka cusub, halka ey guryaha mulkida loo leeyahay ee dabaqyada iyo vilooyinka duugga ahina ee iibka loo doonayaa kor u sii kaceen sannadka gudihiisa. Claudia Wörmann, ahan saadaaliye ka howl-gasha ururka dalaaleyda ayaan saadaalin karin in lagu talaabsanayo is-bedel dhanka sicirka ee ra’sumaalka aan guurin:
- Waxaa lagu jiraa xaalad adag ee aan la saadaalin karin. Waxaanan u baahanahay tirakoobka bilaha agoosto iyo septeembar si aan u kala qeexo in xaalad cusub foodda lagu hayo iyo in kale.
Muddo ayaa la hadal hayay in dalka Iswiidhen uu ka jiro sicir barar dhanka guryaha ah eyna dhici karto inuu dilaaco, sida horayba uga dhacday suuqa guryaha ee Danmark iyo Mareeykanka. Halka hayadda amaahda ee ra’sumaalka aan guurin sheegtay in sicirka guryaha dalku uu 20% ka sareeyo xaqiiqda. Xaaladda maanta lagu jiro ayey iibsadeyaashu dhowreyaan halka sicirku caga-dhigto, halka ey suuqa guryuhana ku soo badanayaan guryaha iibka loo doonayo, mudadda iibintuna maalinba maalinta ka dambeeysa Ka sii dheeraanayso. Ma laga yaabaa haddaba in sicir jab uu ku dhaco suuqa raäsumaalka aan guurin?.
Claudia Wörmanna ayaan fikirkaa qabin:
- Aad bay iigu adag tahay inaan saadaalin sameeyo. Xoogaa waa masuuliyad darro. Mana oran karo 20% ayuu sicirku kor jiraa sida hayadda deymaha ra’sumaalka ee BKN. Haddii ay shaqa la’aantu badato iyo waxyaabo kale ee saameyn kara dhaqaalaha, markaa waa laga yaabaa in sicirku xoogaa hoos u dhaco.
Halkii laga gorgrotami jiray ama la is falisi jiray ayaa iminka waxaa soo baxay nidaam cusub. Iibiyaha ayaa isaga oo rajo ka qabin is-falis wuxuu qabsanayaa sicir uusan hoos uga dhici karin, middaasi oo uu iibsaduhu u qaadan karo saqafka ugu sareeya ee iibiuyuhu doonayo. Markaa ayuu iibsaduhu sicirkaa mid ka hooseeya qabsadaa.
Midda kale ee dejisay sicir bararka ra’sumaalka aan guurin ayaa iyaduna ah saqafka loo qabtay cidda deyn u dooneeysa guri inay marka hore dhaqaale xaddidan haysataa ee ku saleeysan tirada daynat la doonayo.
Maanta waxaa la ogol yahay in aad dayn ku qaadato 85% qiimaha guriga aad iibsanayso, halka 15% dhimanna aad caddaan u bixinso:
- Waxay tallaabadaasi dhimeeysaa tirada iibsadeyaasha, maadaama aaney dadyoowgu wada heli karin lacagta caddaanka ah ee laga doonayo 15, si ey ku xaliyaan xaaladdooda hooy.